China Pre-kuvhura vachizvitakudza trolley uye straightener kuti nokukanda dzichiumbwa muchina vagadziri uye bhizimisi | Zhongtuo
Square pasi mvura mvura mutopota kugadzira muchina pamwe ...
Square mvura nyere kuita muchina pamwe vachikotama muchina ...
Pre-kuvhura vachizvitakudza trolley uye straightener kuti mupumburu ...
Fully kwangoitwa Heavy basa purline muchina stacker add ...
Steel furemu maitiro-tikaisa dzichiumbwa muchina
Pre-yokutanga vachizvitakudza trolley uye straightener kuti nokukanda dzichiumbwa muchina
Pre-kuvhura vachizvitakudza trolley uye straightener kuti nokukanda dzichiumbwa muchina Chii ichi Pre-yokutanga vachizvitakudza trolley rinoshandiswa nokuda? Normalling achitaura, nokuti makobvu coils, zvakaoma kuti coils kusunungurwa mushure kuisa Coil kuti decoiler sezvo vachikotama simba iri ndakasimba. Mushure achisunungura coils, zvinhu musoro uchava kujaira kana baba namai uye nyore kukuvadza vanhu kana kuti coils dauka kune dzimwe place.Then mudziyo uyu kunodiwa. Nokuti coils ukobvu pazasi 3.0mm, kazhinji kutaura, hazvisi neces ...
Chii ichi Pre-yokutanga vachizvitakudza trolley iri rakashandiswa ?
Normalling kutaura, nokuti makobvu coils, zvakaoma kuti coils kusunungurwa mushure kuisa Coil kuti decoiler sezvo vachikotama simba riri ndakasimba. Mushure achisunungura coils, zvinhu musoro uchava kujaira kana baba namai uye nyore kukuvadza vanhu kana kuti coils dauka kune dzimwe place.Then mudziyo uyu kunodiwa. Nokuti coils ukobvu pazasi 3.0mm, kazhinji kutaura, hazvisi zvakakodzera.
Maererano otomatiki dhigirii, kuti Pre-yokutanga vachizvitakudza trolley uye straightener kuti nokukanda dzichiumbwa muchina anewo zvimwe kusiyana. For Zhongtuo kutonhora rinopfungaira Anoumba michina, tine mhando mbiri:
Simple shanduro Pre-yokutanga vachizvitakudza trolley uye straightener :
Structure kuchiitwa: chinosanganisira Gap Bridge hydraulic kusanduka papuratifomu, kurovererwa musoro, uye uncoiling rollers. Sheet zvinopinda straightener kwaita pashure uncoiling. Kuswatura rollers vane tempering uye chroming kupisa kurapwa iyo kuvandudza pemvura kuomarara uye roughness. Kune vaipisa rollers uye kuswatura rollers. Vaipisa rollers zvinogona kugadziridzwa nomumwe.
Higher shanduro Pre-yokutanga vachizvitakudza trolley uye straightener kuti nokukanda dzichiumbwa muchina :
Pre-yokutanga vachizvitakudza trolley, kururamisa muchina
gadziriro Uyu pre-unwinding maitiro kuti zvinotora wonamatidza musoro kubva apo coils rwunotumirwa uncoiler. Save nguva unwinding. The vachizvitakudza trolley anotakura simbi coils uye anosimudza simbi Coil kusvikira huru nomubato ari uncoiler. The vachizvitakudza trolley iri anosundwa hydraulic motokari. Chinoshingaira kutenderera chinotenderera akatasva kumusoro vachizvitakudza trolley kudzinga Coil kuti tenderera panguva pre-buri.
The trolley chikwidzo iri anosundwa hydraulic humburumbira. A mudziyo nefoshoro musoro, yakarurama musoro mudziyo, mumwe dyisa chinotenderera uye clamping mudziyo zvakarongwa pamusoro parutivi vachizvitakudza trolley. Nefoshoro musoro nefoshoro musoro mudziyo chinoshanda uye kutura, uye Nokusimudzwa richikwidibira zvinodzorwa ne hydraulic humburumbira.
The yakarurama chinotenderera rinoshandiswa deredza wonamatidza musoro kuti nyore kupinda leveler uye zvinodzorwa nerimwe hydraulic humburumbira. The motokari kunotevera xy Coordonatele kuti vapiwa kudzora vachizvitakudza
The uncoiler romusoro kaviri chete vachizvitakudza motokari uye garwe musoro. Rinoshandiswa kutsigira vachishandisa kutenderera coils. Huru mugodhi ruchatambanudzirwa uye akasungirirwa pedyo hydraulic humburumbira pakupedzisira. Mushure coils iri clamped, kuti vaipisa chinotenderera anoiswa pamusoro Coil pedyo hydraulic humburumbira. The coils nechido gwenya yokuderedza akatasva kumusoro. Wonamatidza uchaguta munzvimbo vaipisa leveler. The unwinding anoshandisa pneumatic braking. Pamusoro uncoiler, pane kumanikidzwa chinotenderera kuti kunodzivisa rugwaro. The uncoiler inogona zvakazara rakashandurwa zveshure hydraulic humburumbira, kuti Africa inotongwa rokumusoro dyisa, uye photoelectric vasabatwa kwaita DZEMUNHU DZINODZORA.
Previous: Fully kwangoitwa yokuvevura uye nomoto marongedzero tikaisa dzichiumbwa muchina
Next: Metal zvakabatana muurongwa nyere yakabvooka punching nokuda njanji
10 tani hydraulic decoiler pamwe rokukwidza motokari kuti ...
akaturika Sheet Tile Kuita Machine , Hg50 Tube Line , Step Tile Ndakasarudza Machine , Metal Deck Achigadzira Machinery , Rolling Shutter Door Roll Achigadzira Kuita Machinery , Stud Track Machine,